Nkọwa:Igwe Mgbagharị Mgbaji Garage,Ejiri oghere na Motion Sensor,Garage Led Light Fixtures
Home > Ngwaahịa > Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ > 60w Na-ekpuchi Ìhè > 50W Ejiri Oghere Garage na Ihe Motion Sensọ
Uhie Kwadoro 50W Ebube Mgbagharị Mgbaji nwere nnukwu mma Diana ibe na Philips LUMILEDs nwere nnukwu ìhè. Igwe Garage a na Motion Sensor bụ ETL depụtara nke pụtara ndị a Garage Led Light Fixtures na -esonyere a 5 Afọ ikike. Mgbanwe a na-arụ ọrụ ụgbọ oloko a dị mma mee ka ìhè dị nro, nke bụ ihe nchekwa dị mma maka anya.
Ọzọkwa, ọ dịghị IR ma ọ bụ UV na doo. Ụlọ ụgbọala ndị a na-agbanwe bọlbụ mee ka nhazi na ime ihe dị mfe.
Na mgbakwunye na uru ndị a gbakwunyere, ebe anyị na- enwu ọkụ ebe ụgbọala na- enye ihe dị mma dịka "Nkwụsị Mmalite," ma ọ dịghị nke iwe ọkụ ma ọ bụ nke na-eme ka ị maa jijiji nwere ụfọdụ ihe ọkụkụ na-enwu n'èzí. Ọzọkwa, anyị 50w ụgbọala ụgbọala nye ọkụ ọkụ na ihu igwe; na ọnụ ala, na-enweghị Mercury.
Igwe Mgbagharị Mgbaji Garage Ejiri oghere na Motion Sensor Garage Led Light Fixtures Igwe ọkụ ịgba chaa chaa Garage Ebube Mgbazi Mgbaba ụgbọala Garage Mgbapu Mgbanwe Ntugharị Led Street Mbara Igwe Mpụga Mpụga Mbara Igwe Igwe ọkụ dị na mbara igwe